admin, Author at PARIJATMEDIA
स’म्भोगका बेला ध्यान दिनुपर्ने ४ महत्वपुर्ण कुरा
यौ नका बेला अन्तरंग सबैभन्दा महत्पुर्ण मानिन्छ । अन्तरंगले पार्टनरसँगको यौ न स म्पर्कलाई अझ आनन्दमयी बनाउँछ । यसले उच्च यौ न आनन्द प्राप्त गराउँदछ । तर यौ नमा अझ बढि आनन्द पाउन केही कुरामा भने ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । १. सु म्सु म्याउनु हुनत स म्भो गकालागी यौ नां ग नै महत्वपुर्ण हो । त्यसैले अधिकाशं मानिसको ध्यान यौ नां गतर्फ नै केन्द्रित हुन्छ । तर स म्भोग पुर्व पार्टनरको शरीरका बिभिन्न अं गहरु सु म्सु म्याउनु वा चु म्नुले थप आनन्दित बनाउँछ । यसका पार्टनरको स्त न, पेट, घाँटी, नित म्बलाई चु म्दा यसले पार्टनरलाई अझ का मुक बनाउँछ । २. शरीरको सन्तुलन एकअर्काको शरीरमाथि रहेर गरिने स म्भोग आसनले कतिपय अव स्थामा स्वास र्फे न समेत अ प्ठेरो बनाउँछ । तसर्थ शरीरको ब्याले न्समा ध्यानदिनु पर्दछ । अन्यथा शरीरमा भार रहदाँ स्वास फे र्न असहज हुनुका साथै शरीरमा पर्याप्त अक्सिजनको मात्रा नपुग्दा त्यस
“हट एण्ड बोल्ड,अञ्जली अधिकारीलाई (हेर्नुहाेस् १५ तस्बिरमा)
नेपालमा पछिल्लो समय छाेटाे समयमा निकै चर्चामा कमाएकी मोडल अञ्जली अधिकारी हुन् । उनकाे फिगर र सुन्दरताका कारण उनी प्रति दर्शक लाभिएका छन् । मोडल अञ्जलि अधिकारी गीत ‘बोल माया’ बाट सर्वाधिक चर्चामा आएकी थिइन्' । छोटो समयमा उनले धेरै म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको गीत ‘गलबन्दी’ बाट उनको लुक्सको बारेमा सर्वत्र चर्चा भएको थियो '। गीतमा लजाउँदै दिएको उनको प्रस्तुति निकै राम्रो रहेको थियो । गलबन्दी पछि अञ्जली अभिनीत ‘कल्ले दुइदेला’ बोलको रत्यौली गीत युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको थियाे' । उक्त गीतले सार्वजनिक भएको केही दिनमै लोकप्रियता कमाउँदै गएको छ । त्यस गीत चर्चामा आए संगै निकै भाइरल भैइरहेको अञ्जली अधिकारी बहराइनमा खिचिएका तस्बिर यति बेला चर्चामा अाइरहेका हुन्छन् '। हेर्नुहाेस् उनका केही तस्विरहरूः